पूजा लामाको अश्लील भिडियो | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← मेरो घरबाट सुरक्षाकर्मी हटाऊ : परमानन्द झा
माओवादीद्वारा आन्दोलन र संवाद संगसंगै अघि बढाउने उल्लेख →
Posted on 01/11/2009 by जय आले |2टिप्पणीहरु
काठमाडौं, कात्तिक १४, मोडलबाट नायिका हुँदै गायिका भएकी पूजा लामाको अश्लील भिडियोले अपहरणसम्मको ‘स्क्यान्डल’ मच्चाएको छ । पूजाको अश्लील भिडियो सार्वजनिक गरेको भन्दै अपहरणमा परेका एक युवालाई प्रहरीले शुक्रबार मुक्त गरेको छ । पापी फिल्मबाट नायिकाको रूपमा उदाएकी पूजाले पछिल्लोपटक दीपक रायमाझीको नयाँ फिल्म ‘लभ स्टोरी २०६६’ मा अभिनय गरेकी छिन् । सामयिक ‘म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्री’ चल्तीकी मोडल पूजाले पछिल्लो समयमा गीत पनि गाएकी छिन् ।
उनै मोडल, नायिका, गायिका पूजाले आफ्नो प्रेमीसँग गरेको यौनसम्पर्कको भिडियो भन्दै अहिले मोबाइलबाट मोबाइलमा फरवार्ड भइरहेको छ । एक मिनेट २३ सेकेन्डको सो भिडियोमा युवती हातमा कप लिएर केही (सम्भवतः कफी) पिइरहेकी देखिन्छिन् । संवाद र वातावरण हेर्दा यो बिहानको दृश्य हो । कोठाको भित्तामा पूजाकै ब्लोअप तस्बिर देखिन्छ । अश्लील भिडियोमा युवतीको पूरै शरीर देखिन्छ, तर युवकको यौनांग मात्र । पुरुषले युवतीलाई ‘गुडमर्निङ माई लभ’ भन्छन् । पुरुषको उत्तेजित यौनांग देखेर रमाउँदै युवती भन्छिन्, ओ अल्वेज स्ट्यान्डबाई । पुरुष पनि भन्छन्, आँच, क्या दियो । संवादपछि दुवैजना खित्का छाड्छन् । त्यसपछि युवतीले मुखमैथुन सुरु गर्छिन्, भिडियो सकिन्छ ।
भिडियोमा युवतीले वेलावेलामा क्यामेरातिर हेरेर रमाएको स्पष्ट देखिन्छ । भिडियोले स्पष्ट भन्छ, उनीहरूले राजीखुसी यौनसम्पर्क राखेका हुन्, राजीखुसीले नै भिडियो खिचेका हुन् । यही भिडियो सार्वजनिक भएपछि पूजाका ब्यायफ्रेन्ड शिशिर (प्रशन)ले माओवादी कार्यकर्ताको सहयोगमा शुक्रबार पि्रतम पाण्डेलाई अपहरण गराएका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार पूजा र पि्रतम साथी हुन् । पूजाले मोबाइलबाट गीत सार्न दिँदा प्रितमले भिडियो पनि सारेको आरोप पूजाको छ । भिडियो सारेको मात्र होइन, सार्वजनिकसमेत गरेको आरोप लगाउँदै पूजाका ब्यायफ्रेन्डले शिशिरले आफ्नो चिनजानमा रहेको माओवादी कार्यकर्ताबाट प्रितमलाई अपहरण गर्न लगाएका थिए । विवादमा आएपछि आफूलाई शिशिर भनेर चिनाउने प्रशन एक एफएमका कार्यक्रम प्रस्तोता रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
पि्रतमलाई माओवादीको स्वयम्भुमा रहेको १५ नम्बर सम्पर्क कार्यालयमा लगेर राखिएको थियो । जानकारी आएपछि शुक्रबार नै महानगरीय प्रहरी प्रभाग लैनचौरको टोलीले माओवादी कार्यालयमा छापा मारेर पाण्डेलाई मुक्त गराएको थियो । प्रहरीले पाण्डेसहित शिशिर भनिने प्रशनसहित पूजालाई पनि कार्यालयमा बोलाएर छलफल गर्न खोजेको थियो । तर, पूजाले आफ्नो प्रतिनिधि (ब्यायफ्रेन्ड) छ भन्दै नआउने जानकारी गराएकी थिइन् । पूजाको तर्फबाट बोल्दै उनका ब्यायफ्रेन्ड प्रशनले पूजाको मोबाइलका गीत सार्ने क्रममा पि्रतमले भिडियो पनि सारेको र सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका थिए । उनले अर्कैको भिडियोलाई कम्प्युटरबाट ‘म्यानुपुलेट’ गरेर पूजालाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका थिए ।
तर लैनचौर प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलपछि हाम्रो कुरा मिल्यो भन्दै दुवै पक्ष हिँडेको प्रहरी निरीक्षक रुगमबहादुर कुँवरले बताए । अश्लील भिडियो विवादमा अपहरण र उद्धारपछि कार्यालयमा राखेर छलफल गरियो, उनले भने, तर दुवै पक्षले यो विवाद नबढाउने भनेपछि मुक्त गरियो । यता नायिका पूजाले सो सेक्स भिडियो आफ्नो नभएको बताएकी छिन् । मलाई सबै कुरा थाह छ, यस’boutमा म अहिले केही भन्न सक्दिनँ, शुक्रबार साँझ पत्रिकासँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भनिन्, भोलि दस-एघार बजेतिर भेटेर डिटेलमा बताउँछु । तर शनिबार उनी सम्पर्कमा आइनन् । बारम्बार फोन गर्दा पनि उनले फोन उठाइनन् । उनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास दिनभर सफल हुन सकेन । साँझ उनको मोबाइल उठ्यो । तर उताबाट पुरुष आवाज आयो ।
ती पुरुषले आफू पूजाको ब्वायफ्रेन्ड भएको बताउँदै के कुरा गर्नु छ मसँग गर्नुस् भने । उनले भने, म पूजाको ब्वायफ्रेन्ड हुँ । उसको मोबाइल अहिले मसँग छ । जे कुरा गर्नु छ मसँग सोध्नुस् । उनले आफ्नो थर बताउन नचाहे पनि नाम भने शिशिर बताए । सेक्स भिडियोको ’boutमा जिज्ञासा राख्दा उनले भोलि भेटेर कुरा गरौँला भने । उनले भने, म तपाईंलाई भोलि फोन गर्छु । भेटेर कुरा गरौँला नि । फोन काटियो ।
शुक्रबार, साँझ ७:०० बजे, नयाँ पत्रिकाबाट नायिका पूजा लामाको मोबाइलमा डायल । फोन उठ्दैन । पुनः प्रयास गर्दा पनि फोन उठ्दैन । संवाददाताको मोबाइलबाट पूजाको मोबाइलमा एसएमएस म नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लक्ष्मण सुवेदी । तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्छु । फोन गर्नुहोला अथवा रिसिभ गर्नुहोला । ७:१५ मा संवाददाताको मोबाइलबाट पूजाको मोबाइलमा पुनः डायल । पूजा मोबाइल उठाउँछिन् ।
पूजा : हो, यस’boutमा मलाई सबै थाहा छ । तपाईंहरूले पनि हेरिसक्नुभयो होला, तर त्यो भिडियो मेरो होइन ।
संवाददाता : तर भिडियोमा त तपाईं स्पष्ट देखिनुभएको छ, कोठाको भित्तामा तपाईंकै फोटो छ, …….. ?
पूजा : होइन, यस’boutमा अहिले म कुरा गर्न नसक्ने ठाउँमा छु । भोलि डिटेलमा बताउँछु नि है, दस-एघार बजेतिर भेटेर कुरा गरौँला नि ।
पूजा : हैन म यस’boutमा भोलि नै भेटेर डिटेलमा भन्छु । अहिले मिल्दैन ।
संवाददाता : तर त्यो भिडियो तपाइंको होइन भने अरू ‘डिटेल’ कुरा गर्न केही बाँकी हुन्छ र ?
पूजा : होइन, यस’boutमा धेरै कुरा छ । भोलि नै गरौँ न है बाइ…. फोन कटियो ।
शनिबार : २ बजेसम्म पूजाको फोन आएन । २ बजेपछि नयाँ पत्रिकाबाट लगातार आठपटक फोन डायल । केही फोन काटिए, अरू उठेनन् ।
उताबाट : म……. पूजाको ब्यायफ्रेन्ड ।
यताबाट : शिशिर…, थर नि ?
यताबाट : पूजाजीको भिडियो’boutमा मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ, आज भेटेर कुरा गरौँला भन्नुभएको थियो । फोन आएन । मैले फोन गर्दा पनि सम्पर्क भएन । त्यही भिडियो’bout बुझौँ भनेर ।
उताबाट : यस’bout अहिले कुरा नगरौँ, भोलि भेटौँला ।
2 responses to “पूजा लामाको अश्लील भिडियो”
JEEVAN KC | 01/11/2009 मा 8:59 बिहान |
sex film banauna man lagi k lookera banaune ni , open ma banaune ni bdeshma gayara , tara sex dheri chaheni keti lai bichar nagari sex garchan yestai huncha, paisa vaya pugcha teni harulai,
BINOD STHA | 14/04/2011 मा 1:11 अपराह्न |
very nice video.keep it up